Al-shabaab oo qarxiyay masaajid iyo ceel biyood ku yaala deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo qarxiyay masaajid iyo ceel biyood ku yaala deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay halkaas ku qarxiyeen masaajid iyo ceelal matooro ah oo dadka deegaanka ay biyaha ka cabi jireen.
Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Galcad oo arrintaan ka cabanaya ayaa la hadlay warbaahinta Muqdisho, waxaana ay sheegeen in sababta ay Al-shabaab arrintaan u sameynayaan ay tahay in laga yaabo inay dareemeen in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay deegaankaas kusoo wajahan yihiin.
Al-shabaab ayaa inta badan markii ay goobaha ay gacanta ku haayaan ka baxayaan waxay ka geystaan dhibaatooyin isugu jira dil, iyo caburin ay u geystaan dadka shacabka ah.
Dhinaca kale, warar madax banaan aynu ka heleyno gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay dhaq-dhaqaayo culus ka wadaan qeybo ka mid ah gobolkaas, iyadoona la sheegayo in ciidamadaasi ay qorsheynayaan inay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, waxaana xaaladda deegaanka Galcad ay haatan tahay mid aad u kacsan, iyadoona laga yaabo in halkaasi uu dagaalo ku dhexmaro ciidanka Al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM oo deegaankaasi kusoo wajahan.